ကမ္ဘောဒီးယား (32) ဗီယက်နမ် (19) ထိုင််း (18) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (17) မြန်မာ (13) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (3) အင်ဒိုနီးရှား (3) မလေးရှား (3) ဖိလစ်ပိုင် (3) စင်္ကာပူ (3) ကိုကိုး (ကီးလင်း) က... (1) တရုတ် (1) ခရစ္စမတ်ကျွန်း (1) တီမော လက်စ်တေ (1)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (46) ခမာဘာသာစကား (13) ထိုင်း (6) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (6)
PDF (50) HTML (3) JPEG (1) JSON (1) mrc (1) XML (1)
Open Development Ca... (18) Open Development Me... (13) Open Development Th... (6) Open Development Vi... (6) Open Development Laos (4) ADB (2) Village Focus Inter... (2) Open Development My... (1)
ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင... (52) ပညာသင်ကြားနိုင်မှု (14) SDG4Quality educa... (12) စီးပွါးရေးနှင့် ကုန... (6) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (4) မူလတန်းနှင့် အလယ်တန... (4) စိုက်ပျိုးရေး (3) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (3) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (3) သစ်တောများ နှင့် သစ... (3) အလုပ်သမား (3) SDG3Good health a... (3) ကုန်သွယ်ရေး (3) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှ... (3) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (2) ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒန... (2) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (2) တိုင်းရင်းသားလူနည်း... (2) လူဦးရေ (2) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတ... (2) ခရီးသွားလုပ်ငန်း (2) အကြီးစား နှင့် အသေး... (2) ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာ... (1) သတင်းအချက်အလက်များ ... (1) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (1) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (1) အနုပညာ၊ ဝိဇ္ဇာပညာ (1) အနုပညာနှင့် သက်ဆိုင... (1) ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ငွ... (1) ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ငွ... (1) ဇီဝမျိုးကွဲများ (1) ကလေးလုပ်သား (1) ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ (1) လူထုအခြေပြု ငါးဖမ်း... (1) ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး... (1) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက... (1) စီးပွါးရေးဆိုင်ရာမူ... (1) ရေလွှမ်းမိုးမှုများ (1) နိုင်ငံတွင်းတွင်အလု... (1) သစ်တောမြေဧရိယာ ဖုံး... (1) အတည်ပြုခန့်အပ်ထားသေ... (1) အလုပ်သမားများ၏ သမရိ... (1) အခြေခံအဆောက်အဦများ (1) နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး (1) ဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့... (1) ပြည်ပရောက် အလုပ်သမာ... (1) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု (1) လူဦးရေနှင့် သန်းခေါ... (1) Poverty reduction (1) ကြိုးဝိုင်းဧရိယာများ (1)
unspecified (19) Creative Commons At... (10) Creative Commons At... (7) License not specified (6) CC-BY-SA-4.0 (5) CC-BY-3.0-IGO (3) CC-BY-4.0 (2)
Reports, journal ar... (27) Conference/workshop... (8) Analysis, discussio... (4) Books and book chap... (4) Guidelines, instruc... (3) Issue and policy br... (2) Profiles - Geograph... (2) Archived web content (1) Case studies (1)
52 library_records found
ခေါင်းစဥ်များ: Education and training
ကမ္ဘောဒီးယား Books and book chapters Ministry of Education, Youth and Sport 2021 ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, ပညာသင်ကြားနိုင်မှု, မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းပညာရေး
The Education Statistics and Indicators 2020-2021 provides basic information regarding public schools including pre-school, primary, and secondary education in Cambodia. The...
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Ministry of Education, Youth and Sport 2019 ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, ပညာသင်ကြားနိုင်မှု
Data Literacy Module 6: Data Security and Digital Rights
ထိုင််း Conference/workshop proceedings and presentations World Bank, Adapted and Translated by Open Development Thailand 2021 ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး
Data literacy is the ability to read, understand, work with, analyze, and argue with data. It is also the ability to derive meaningful information from data. Data literacy is...
Data Literacy Module 5: Thinking LikeaData Journalist
Data Literacy Module 4: Visualizing Data
Data Literacy Module 3: Understanding Data
Data Literacy Module 2: Finding Data, Data Collection & Data Formats
Data Literacy Module 1: From Evidence to Stories
ကမ္ဘောဒီးယား Books and book chapters Open Development Cambodian (ODC) & Department of Information... 2020 ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, ပညာသင်ကြားနိုင်မှု, မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းပညာရေး
This map reading and using textbook was developed by the Department of Information Technology (DIT) in collaboration with the Open Development Cambodia (ODC) for the public...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာနေသော ပထဝီဝင် (မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၊ တည်နေရာ၊ နယ်နမိတ်) ဆိုင်ရာနည်းပညာရပ်များ ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာစေရန် တည်ဆောက်ပေးခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (MIMU) ၏ စာတမ်းဖတ်ပွဲ
မြန်မာ Conference/workshop proceedings and presentations မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (MIMU) 2018 ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကူညီထောက်ပံ့မှုများ
ပထဝီဝင် ဆိုင်ရာနည်းပညာရပ်များတဟုန်တိုးမြင့်မားလာခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၊ အရပ် ဒေသဆိုင်ရာ (GIS) ပညာရှင်များအတွက်သာမက၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲသူများ၊ ...
ကမ္ဘောဒီးယား Guidelines, instruction manuals, handbooks Royal Government of Cambodia 2019 ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်လျှောက်မှုများ ရရှိနိုင်မှု
This policy aims to contribute to improving quality of education and giving learners and educational personnel access to good health and welfare services to become human...
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) SeeBeyondBorders 2017 ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, ပညာသင်ကြားနိုင်မှု
This assessment report identifies priority quality Teaching and Learning in School (QTLS) interventions to address the “learning crisis” in relation to Cambodia, and improve...
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Mr. Havard Bergo and Ms. Arunima Sharan ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, ပညာသင်ကြားနိုင်မှု
This evaluation is part ofalarger study of the Global Partnership for Education (GPE) that comprises 30 country level evaluations (CLEs). The overall study runs from 2017...
ထိုင််း Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Amare, Mulubrhan, Asian Development Bank, Hohfeld, Lena;... 2012 စီးပွါးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး, နိုင်ငံတွင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံခြားသားများ, ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, ပြည်ပရောက် အလုပ်သမားများ, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, အလုပ်သမားများ၏ သမရိုးကျ မဟုတ်သော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု
Vietnam 2035: Toward Prosperity, Creativity, Equity and Democracy
ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) World Bank, Cao, Sinh Viet; Demombynes, Gabriel; Kwakwa, Victoria;... 2016 ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
The year 2015 marks 70 years since Vietnam’s Declaration of Independence, 40 years since Reunification, and just short of 30 years from the launch of Doi Moi, which catapulted...
ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Cunningham, Wendy; Pimhidzai, Obert;, World Bank 2018 စိုက်ပျိုးရေး, ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, အလုပ်သမား
Vietnam's 50 million jobs areacornerstone of its economic success. The transformation toward services and manufacturing, and impressive labor productivity and wage growth led...
Public Education Statistics and Indicators (2017-2018)
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Ministry of Education, Youth, and Sport 2019 ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး
The Education Statistics and Indicators 2017-2018 Book provides basic information regarding public schools including pre-school, primary, and secondary education in Cambodia....
Education Statistics and Indicators (2015-2016)
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Ministry of Education, Youth, and Sport 2016 ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး
The Education Statistics and Indicators 2015-2016 Book provides basic information regarding public schools such as pre-school, primary, and secondary education in Cambodia. The...